Otú e si kee ihe | Ihe Baịbụl Kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ọ̀ bụ ụbọchị isii nkịtị ka Chineke ji kee ihe?
“Ná mmalite, Chineke kere eluigwe na ụwa.”—Jenesis 1:1.
Chineke kere eluigwe na ụwa ọtụtụ afọ gara aga. Na Jenesis 1:1, Baịbụl kwuru na ọ bụ “ná mmalite.” Ndị ọkà mmụta sayensị kwetakwara na eluigwe na ụwa nwere mmalite. Otu ihe ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara n’oge na-adịbeghị anya gosiri na eluigwe na ụwa anọruola ihe dị ka ijeri afọ iri na anọ.
Baịbụl kwukwara na Chineke ji “ụbọchị” isii kee ihe. Ma, o kwughị na ọ bụ ụbọchị isii nkịtị. (Jenesis 1:31) Nke bụ́ eziokwu bụ na ihe Baịbụl kpọrọ “otu ụbọchị” nwere ike ịbụ ọtụtụ ụbọchị, ọtụtụ ọnwa ma ọ bụkwanụ ọtụtụ afọ. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kpọrọ oge niile ahụ Chineke ji kee ihe “ụbọchị Jehova bụ́ Chineke mere ụwa na eluigwe.” (Jenesis 2:4) O doro anya na ọ ga-abụ na ‘ụbọchị’ ahụ Chineke ji kee ihe bụ ọtụtụ puku afọ.—Abụ Ọma 90:4.
Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ ụbọchị isii nkịtị ka e ji kee ụwa. Ihe ahụ ha na-ekwu nwere ike ime ka mmadụ ghara ikweta ihe Baịbụl kwuru. Ma ọ bụrụ na ihe Baịbụl kwuru banyere otú Chineke si kee ihe bụ eziokwu, ihe ndị ọzọ Baịbụl kwuru ga-abara gị uru.—Ilu 3:21.
Chineke ò bu ụzọ kee ihe ndị na-adịghị ndụ ha emechaa ghọwazie ihe dị ndụ?
“Chineke wee sị: ‘Ka ala wepụta mkpụrụ obi dị ndụ n’ụdị ha dị iche iche.’”—Jenesis 1:24.
Chineke ebughị ụzọ kee ihe ndị dị ndụ dị obere, hapụzie ha ka ha jiri aka ha ghọwa ihe ndị ọzọ buru ibu. Kama, o kere osisi dị iche iche na ụmụ anụmanụ dị iche iche. Osisi ndị ahụ na-amị mkpụrụ ha, ọ bụghị mkpụrụ osisi ọzọ. Ụmụ anụmanụ ndị ahụ ana-amụkwa ụmụ nke ha. (Jenesis 1:11, 21, 24) Ọ bụ otú ha si amụ ụmụ ha mere ụdị anụmanụ ndị ahụ Chineke kere na mbụ ji ju ebe niile n’ụwa.—Abụ Ọma 89:11.
Baịbụl ekwughị ụdị ole e nwere ike inwe n’otu anụmanụ. Dị ka ihe atụ, e nwere ewu Igbo, nwee ewu Awụsa. Ọ bụrụ na mkpi Awụsa agbaa ewu Igbo, nwa ọ ga-amụ agaghị abụ ewu Awụsa ma ọ bụkwanụ ewu Igbo. Ọ ga-abụ ụdị ewu ọzọ. Ụfọdụ ndị na-akpọ ụdị ihe a evolushọn. Ma, ị manụ na ọ bụ ụdị ewu ọzọ ka ewu ahụ mụtara, ọ bụghị nkịta. Ndị ọkà mmụta sayensị kwukwara na e nweghị ụdị osisi ma ọ bụ anụmanụ ọ bụla nọkatara dịwa ndụ ma e wepụ ndị ahụ Chineke kere kemgbe ụwa.
Baịbụl kwuru na Chineke kere anụmanụ ka ha na-amụ ụdị ha. Sayensị kwadoro ihe a Baịbụl kwuru. Ebe ọ bụ na ihe a Baịbụl kwuru bụ eziokwu, ihe ndị ọzọ o kwuru, dị ka akụkọ ndị mmadụ na amụma bụkwa eziokwu.
Ebee ka Chineke si nweta ihe ndị o ji kee eluigwe na ụwa?
“Aka m abụọ ka m ji gbasaa mbara igwe.”—Aịzaya 45:12, “Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society.”
Ike Chineke enweghị atụ. (Job 37:23) Ndị ọkà mmụta chọpụtakwara na o nweghị ihe ọ bụla ga-adị ma ọ bụrụ na e jighị ike mee ya. Ihe a ha kwuru bụ eziokwu. Baịbụl kwukwara na Chineke nwere ike dị ukwuu, ọ bụkwa ike ahụ ka o ji kee eluigwe na ụwa. (Aịzaya 40:26) Chineke kwere nkwa na ya ga-eji ike ya na-elekọta ihe niile o kere. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji kwuo na Chineke na-eme ka anyanwụ, ọnwa na kpakpando dịruo mgbe ebighị ebi.—Abụ Ọma 148:3-6.
Otu ọkà mmụta kwuru na sayensị agaghị akọwali otú eluigwe na ụwa si malite ịdị na ihe mere e ji kee ha. Ma, Baịbụl kwuru otú Chineke si kee eluigwe na ụwa nakwa ihe mere o ji kee ụwa. Ọ gwakwara anyị ihe mere Chineke ji kee ụmụ mmadụ. *
^ para. 16 Ị chọọ ịgụkwu banyere ihe e kwuru ebe a, gụọ isi nke atọ n’akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova biri ya. Ị gaa n’adres Ịntanet anyị, ị ga-ahụ ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú E Si Kee Ihe
IHE BAỊBỤL KWURU Otú E Si Kee Ihe
IHE BAỊBỤL KWURU Ime Mgbaasị
È KERE YA EKE? Ọnyà Ududo
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere TETA! Ebe Pụrụ Iche n’Ịntanet
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Ebe Pụrụ Iche n’Ịntanet
TETA! Ebe Pụrụ Iche n’Ịntanet